NY VOKATRY NY FISARAHANA TAMIN’NY TOMPO – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mai 17, 2013 mai 31, 2013 Laisser un commentaire sur NY VOKATRY NY FISARAHANA TAMIN’NY TOMPO
Ireo rehetra ireo niray saina naharitra nivavaka mbamin’ny vehivavy sy Maria, renin’i Jesosy ary ny rahalahiny. Asa 1: 14
Ny tantara eto amin’ny Asan’ny Apostoly talohan’izao teny izao dia milaza ny amin’ i Jesosy nakarina, ary nisy rahona nitondra Azy, ka tsy hitan’ny maso intsony Izy. Tafasaraka tamin’ireo mpianany Jesosy. Tsy hahita an’i Jesosy amin’ny nofo intsony izy ireo mandra-pihaviny indray. Tsy toy ny fisarahana tamin’ny Tompo fony Izy maty anefa izao fisarahana izao ho an’ireo mpianatra, fa fisarahana feno fanantenana, satria Jesosy velona no nisaraka taminy, ary Jesosy nisaraka taminy tamim-boninahitra, Jesosy nentin’ny rahona niakatra. Feno fahatokiana ny mpianatra, satria na fahafatesana aza efa noresen’ny Tompo. Isan’ny mahafeno fanantenana ireto mpianatra koa ny tenin’i Jesosy hoe: mahatsara anareo ny fialàko, fa raha tsy hiala Aho dia tsy ho avy aty aminareo ny Mpananatra; fa raha handeha Aho, dia irahiko aty aminareo Izy.
Tsy nandeha nitaona ny namany hanarato intsony i Petera fa izy rehetra dia niray saina naharitra nivavaka. Tsy nihahaka ny ondry na dia tsy teo intsony aza ny Mpiandry ondry. Manambara inona izany? Manambara fa nahomby ny fitaizana nataon’ny Tompo tamin’ny mpianany. Na dia tsy nisy mpitarika aza ireo mpianatra dia tsy nifanaritaka, na namoy fo, fa niray saina kosa. Niseho sahady eto ny maha mpianatry ny Tompo azy ireo, ka nijoro ho vavolombelona hatreha- maha- efa ary hiamboho maha- vita.
Tsy niray saina fotsiny fa niray saina nivavaka. Nandaitra tamin’ireto mpianatra ny fampianarana nataon’i Jesosy hoe: tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka!
Tsy ireo mpianatra ihany anefa no teo fa tonga koa ny vehivavy sy Maria renin’i Jesosy, ary ny rahalahiny: mampiseho ny asa nataon’ny Tompo fony Izy teto an-tany. Ny ankohonana matetika no sarotra taomina indrindra, fa ny an’ny Tompo dia nahatoky hatramin’ny ankohonany na dia tsy teo intsony aza ny tenany. Asa! mba aiza ny firaisan-tsainantsika amin’ny faharetana mivavaka? Ny Fanahy Masina izay efa nomena antsika tamin’ny Batisa ve mba ivelomana ankehitriny? sa efa nosoloina fanahy fito hafa ka mahatonga antsika ratsy noho ny teo aloha aza? Fa ny an’ireto mpianatra sy ankohonan’i Jesosy dia naharitra niray saina nivavaka izy ireo. Andeha isika hanolo-tena ho an’ny Tompo, andeha hanavao ny fanoloran-tenantsika ho Azy indray, ka hiray saina, haharitra mivavaka.
Jesosy mampahery anao!
Publié parfilazantsaramada mai 17, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorized